ဒေါက်တာ လှကျော်ဇော – ဆိုရှယ်လစ်တပ်မှူးများ- အပိုင်း(၁) – ဗိုလ်အောင်ကြီး | MoeMaKa Burmese News & Media
ကြယ်နီတပွင့် (ခ) ကဗျာဆရာမ မစိမ်းပင်ကြွေလွင့်သွားခြင်းအပေါ် ၀မ်းနည်းမှုမှတ်တမ်း
ခွန်းမတ်ရ်ကိုဘန် - ၁၉၄၇-ခုနှစ် ပင်လုံညီလာခံ မှ ၂၁-ရာစုပင်လုံညီလာခံဆီသို့ (အပုိုင်း ၂)
အုန်းနိုင် - ၁၉၉၁ ခုနှစ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ ထုတ်ပယ်ခြင်း (၆)
ဝင်းအောင်ကြီး - လူအောင်ဆန်း (၁-၄)
ဒေါက်တာ လှကျော်ဇော – ဆိုရှယ်လစ်တပ်မှူးများ- အပိုင်း(၁) – ဗိုလ်အောင်ကြီး
(မာယာအွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်း) နိုဝင်ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၄
ဖေဖေရဲ့ ကိုယ်တိုင်ရေး အတ္ထုပ္ပတ္တိစာအုပ်ကို ဓူဝံစာပေတိုက်က ၂ဝဝ၇ ခုနှစ်မှာ ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ စာအုပ်ထွက် လာပြီးနောက် စာအုပ်ဝေဖန်ရေးတွေလည်း အတော်ထွက်လာပါတယ်။ ဒီအထဲက လွတ်လပ်တဲ့ အာရှအသံ RFA “စာဝိုင်းပေဝိုင်း” စကားဝိုင်းအခန်း (ဒေါ်)မေစာရဲ့ ဝေဖန်ချက်တွေထဲက အကြောင်းအရာတခုမှာ “စာရေးသူဟာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အရ ဘယ်သူ‹ကိုမှ ပုတ်ခတ်ဝေဖန် ရေးသားခြင်း မပြုခဲ့ဘူး။ မိမိကို ဒုက္ခပေးခဲ့သူများကိုတောင် မရေးမဖြစ် ရေးဖို့ လိုအပ် သလောက်သာ ရေးသားထားတယ်”လို့ မှတ်ချက်ပြုသွားပါတယ်။
တခါ ၁၉၆ဝ ခုနှစ်များအတွင်း ဖေဖေ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့မှာ လှုပ်ရှားနေတုန်းက နယ်ခရီးတခုကအပြန် မီးရထားပေါ်မှာ လူတယောက်က ဖေဖေ့နား ချဉ်းကပ်လာပြီး “ဗိုလ်ချုပ်ရယ် æ ကျွန်တော် စစ်ပြန်ရဲဘော်တဦးပါ။ ဗိုလ်ချုပ်ကို ဗိုလ်ချုပ် အသက်ကယ်ထားတဲ့ လူတွေက ပြန်ဒုက္ခပေးတာကို ဗိုလ်ချုပ်က ဒီလိုပဲ ခံနေတော့မလား။ သူတို့အပေါ် နည်းနည်းမှ စိတ်မနာ ဘူးလား” လို့ လာပြောတဲ့အခါ ဖေဖေက ဘာမှပြန်မပြောဘဲ ရယ်ပဲနေတယ်လို့ ဖေဖေနဲ့ အတူပါသွားတဲ့ ကျွန်မတို့ အစ်ကိုဝမ်းကွဲ တယောက်က ပြန်ပြောပြဖူးပါတယ်။ (အဲဒီသူက ဆိုရှယ်လစ် တပ်မှူးတဦးဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်မောင်မောင် နောင် ဗိုလ်မှူးချုပ်၊ အစ္စရေးသံအမတ်ကြီးကို ရည်ညွှန်းဟန်တူပါတယ်။)
ဖေဖေရဲ့စာအုပ်ထဲမှာ သူ တပ်ကထွက်ရတဲ့ အပိုင်းမှာ ဗိုလ်အောင်ကြီးအကြောင်း ရေးထားရာမှာ စာလေးနှစ်ကြောင်းပဲ ရှိပါတယ်။
“ဗိုလ်အောင်ကြီးမှာ နိုင်ငံရေးထက် ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ရာထူးအတွက်ပါ ကျွန်တော့ကို ဆန့်ကျင်မှု အလွန်ပြင်းထန်ပြီး ကျွန်တော့် အပေါ် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရလည်း အလွန်မုန်းတီးပါတယ်။ ကျွန်တော်တပ်တွင်းရှိနေသရွေ့ သူ့အနေနဲ့ ကျွန်တော့်ကို ကျော်ကာ ထိပ် ရောက်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါ”
ကျွန်မတို့ မောင်နှမတတွေကိုလည်း ငယ်စဉ်ကတည်းက “တို့ မှာ လူပုဂ္ဂိုလ်အရ ရန်သူ တယောက်မှမရှိဘူး။ အားလုံးနဲ့ သင့်တင့်အောင် ဆက်ဆံကြ” လို့ သင်ကြား ပေးတတ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဖေဖေ ပင်စင်ယူပြီး ကျွန်မတို့ မိသားစု စမ်းချောင်း ရပ်ကွက်ထဲ ပြောင်းလာပြီးနောက် အရပ်သူအရပ်သားများနဲ့ ဆက်ဆံရာမှာ အဆင်ပြေအောင် ဆက်ဆံဖို့ ဖေဖေက အမြဲသွန် သင်လေ့ရှိပါတယ်။
ဒါ ဖေဖေရဲ့ အခြေခံစိတ်ဓာတ်ပါ။ ဒါပေမဲ့ ဖေဖေလည်း လူသားပဲလေ။ တခါတရံ ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ်တွေ ပြောရင်းက စိတ်အချဉ်ပေါက်လာရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် အကြောင်းကိစ္စ တိုက်ဆိုင်လာရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် (သူ့ စိတ်ထဲမှာ အခုအခံ ဖြစ်နေတဲ့ ဆိုရှယ်လစ် တပ်မှူးတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး) စိတ်လိုက်မာန်ပါ ပြောဆိုတာတွေ ကျွန်မတို့ ရှေ့မှာတော့ ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဖေဖေ ပြောပြခဲ့ဖူးတာ တချို့ ကျွန်မ ပြန်ပြောပြပါမယ်။
“ဟေ့-သူတို့ ဆိုရှယ်လစ်တပ်မှူးတွေ ဘယ်သူများ ကောင်းကောင်း စစ်တိုက်တတ်သလဲ။ ဗိုလ်အောင်ကြီးဆိုလည်း ဒီလောက်ကြီးတဲ့ ရာထူးကြီးသာ ယူထားတာ၊ တခါမှ စစ်မတိုက်ဖူးဘူး။ ဗိုလ်မောင်မောင်လည်း တပွဲပဲ တိုက်ဖူးတယ်။ သူတိုက်တဲ့ပွဲမှာ တပ်လည်းပျက်၊ သူလည်း သုံ့ပန်းဖြစ်တာပဲ” တဲ့။
(မှတ်ချက်-၁၉၄၉ ခုနှစ်က ဗိုလ်မှူးကြီးမောင်မောင် မြောက်ပိုင်းတိုင်းမှူးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ် မိတ္ထီလာမှာ ကေအင်ဒီအိုများရဲ့ အဖမ်းခံရပြီး နှစ်နှစ်နီးပါး သုံ‹ပန်းအဖြစ် နေခဲ့ရပါတယ်။)
“ဗိုလ်အောင်ကြီးဟာ တပ်ထဲလာပြီး ဆိုရှယ်လစ်ပါတီ ကိုယ်စားလှယ်ဆိုပြီး ဗိုလ်ကျနေတာပဲ” လို့လည်း ပြောဖူးပါတယ်။
ဒီနေရာမှာတော့ ဖေဖေ့အမြင်နဲ့ ဦးကျော်ငြိမ်း (ဖဆပလခေတ် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးနှင့် ဒုဝန်ကြီးချုပ်) အမြင်က တူနေပါ တယ်။
ဦးကျော်ငြိမ်းကလည်း ဗိုလ်အောင်ကြီးဟာ ငါတို့ ပါတီထဲလာပြီး တပ်ကိုယ်စားလှယ်ဆိုပြီး ဗိုလ်ကျနေတာပဲ” လို့ သူ့သားများကို ပြောဖူးကြောင်း သိရပါတယ်။
(မှတ်ချက်- ဦးကျော်ငြိမ်းပြောတဲ့ ငါတို့ ပါတီဆိုတာ ၁၉၄၅ ခုနှစ်က သူတို့တတွေ ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြတဲ့ ပြည်သူ့အရေးတော် ပုံပါတီ၊ နောင် ဆိုရှယ်လစ်ပါတီကို ဆိုလိုတာပါ။)
တကယ်တော့ ဗိုလ်အောင်ကြီးဟာ သမိုင်းအရ ခေသူမဟုတ်ပါဘူး။ ၁၃ဝဝ ပြည့် ကျောင်းသားအရေးတော်ပုံ ကတည်းက သူ့ဇာတိ ပေါင်းတည်မြို့ရဲ့ ကျောင်းသားသမဂ္ဂမှာ ဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့ပြီး BIA ကာလမှာလည်း ဂျပန်က အရင် စောပြန်လာခဲ့တဲ့ ဗိုလ်နေဝင်းတို့နဲ့ ပေါင်းပြီး မြေအောက်လှုပ်ရှားမှုများမှာ ပါဝင်ပြီး ဂျပန်တော်လှန်ရေးမှာလည်း တိုင်း (၁)နဲ့ တိုင်း (၂)တို့မှာ တာဝန်ကြီးတွေ ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူး သူပါ။
ဒါပေမဲ့ သူဟာလည်း ဗိုလ်နေဝင်းလိုပဲ တကိုယ်ရေ ကြီးပွားလိုစိတ် ပြင်းထန်သူပါပဲ။ ဂျပန်ခေတ်မှာ (BDA ခေတ်) ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ လှုံ့ဆော်ချက်နဲ့ တပ်မတော်ထဲ လှိမ့်ဝင်လာတဲ့ ပညာတတ်အုပ်စုကို သူနဲ့ ဗိုလ်မောင်မောင် နှစ်ယောက် ပေါင်းပြီး စည်းရုံးသိမ်းသွင်းခဲ့ပါတယ်။ ‘ဂျပန်တော်လှန်ရေး’ ဆိုတာကို အကြောင်းပြပြီး တပ်တွင်းမှာ ဂိုဏ်းဂဏ လှုပ်ရှားမှုတွေ လုပ်ခဲ့ပြီး အထူးသဖြင့် ဂျပန်ပြန် ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင်များ (အဲဒီ ကာလက တပ်တွင်း ရာထူးကြီးများ ရထားသူများ) ကို ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြ ပါတယ်။ အဲဒီကာလက ထိပ်တန်းရောက် ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင်တွေဟာ ကွန်မြူနစ်ပါတီနဲ့ နီးစပ်ကြသူများပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ သူတို့က အကျင့်စာရိတ္တအရ ယိုင်နဲ့ပြီး ဘယ်လိုမှ ကွန်မြူနစ်နဲ့ မနီးစပ်နိုင်တဲ့ (ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် အများစုရဲ့ လေးစားမှုလည်း မခံရဘဲ တကောင်ကြွက်ဖြစ်နေတဲ့) ဗိုလ်နေဝင်းကို ဆရာတင်၊ မြေတောင်မြှောက်ပြီး ဂိုဏ်းအုပ်စု ဖွဲ့ခဲ့ကြ တာပါပဲ။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း သက်ရှိ ထင်ရှားရှိစဉ်ကတော့ တပ်ထဲက ဒီလုပ်ဟန်တွေကို သူ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေး သြဇာနဲ့ ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကိုယ်တိုင်ကလည်း ဗိုလ်အောင်ကြီးကိုရော၊ ဗိုလ်မောင်မောင်ကိုရော သူတို့ရဲ့ အခြေခံ အားကောင်းချက်များကြောင့် နှစ်ခြိုက်သဘောကျခဲ့ပြီး ဘက်စုံက မွေးမြူ ပျိုးထောင်ပေးခဲ့ပုံ ရပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ ၁၉၄၇ ခု၊ တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲမှာ သခင်အောင်ကြီးအဖြစ် (တပ်မှထွက်ပြီး နိုင်ငံရေးဘက် ပြောင်းစေကာ) ပြည် အရှေ့ပိုင်း အမတ်အဖြစ် ဖဆပလမှ ဝင်ရောက်အရွေးခံခိုင်းလို့ လွှတ်တော်အမတ် ဖြစ်သွားခဲ့ဖူး ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဗိုလ်ချုပ်တို့ ကျဆုံးပြီး ဖဆပလအဖွဲ့ကြီးလည်း လက်ယာသမားများဖြစ်တဲ့ ဆိုရှယ်လစ်ဂိုဏ်းက အုပ်စီးမိသွားချိန် မှာတော့ ဗိုလ်အောင်ကြီးဟာ ဆိုရှယ်လစ်ပါတီ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် တပ်ထဲပြန်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဝန်ကြီးချုပ်သာ ဖြစ်လာရတယ် တကယ့် နိုင်ငံရေးအင်အားစု အောက်အခြေခံ မရှိတဲ့ ဦးနုဟာ ဆိုရှယ်လစ်ပါတီ အလိုကျ လုပ်ဆောင်လာရပြီး ဗိုလ်အောင်ကြီးကို ကာကွယ်ရေးဌာန ပါလီမန်အတွင်းဝန်အဖြစ် စပေးပြီး အဲဒီက မှတဆင့် တပ်ထဲ ပြန်ရောက်လာရာမှာ ပထမတော့ လဲဗီးတပ် (နောင် စစ်ဝန်ထမ်းတပ်) ဆိုတာရဲ့ တပ်မင်းကြီးအဖြစ် ဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့် တိုက်ရိုက်ပေးပြီး ၁၉၅ဝ ခုနှစ်မှာတော့ စစ်ဦးစီးဌာန (စစ်ရုံးချုပ်)ကို ဦးစီးလိုက်နိုင်ပါတော့တယ်။
စစ်ရုံးချုပ် War office ဟာ တပ်တွင်း ရာထူး အတက်အကျ အပြောင်း အရွှေ့တွေ၊ နိုင်ငံခြား ပညာတော်သင်ခွင့်တွေ အားလုံးကို ကိုင်ထားတဲ့ဌာန ဖြစ်လေတော့ အခွင့်အရေး လိုချင်သူတွေ အားလုံးရဲ့ ဝိုင်းဝန်း အားထားပြီး အားကိုး အားထား ရှာရာ ဌာနကြီး ဖြစ်သွားပါတော့တယ်။ ပြည်တွင်းစစ် ပြင်းထန်လာချိန်မှာ မသေမပျောက် ရုံးထိုင် လုပ်ငန်းတွေ လိုချင်တဲ့ တပ်မတော်အရာရှိများကလည်း သူတို့ကို ကပ်ရ၊ ရှေ့တန်းမှာ စစ်တိုက်နေရတဲ့ တပ်တွေကလည်း နောက်ပိုင်းက ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ ပြည့်ပြည့်စုံစုံရရှိဖို့၊ လိုအပ်သလောက် ရရှိဖို့ အဲဒီ စစ်ရုံးချုပ်က လူတွေကိုပဲ အားကိုးရနဲ့ ဗိုလ်အောင်ကြီးတို့ ဘယ်လောက် သြဇာကြီးခဲ့မယ်ဆိုတာ ခန့်မှန်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ကျွန်မ ဥပမာတခု ပြောပါရစေ။
၁၉၅၄-၅၅ ခုနှစ်များအတွင်း ဖေဖေ တရုတ်ဖြူစစ်ဆင်ရေးများ ဆင်နွှဲနေစဉ်ကာလ ဖြစ်ရပ်များပါ။ ဖေဖေဟာ အဲဒီတုန်းက ဗိုလ်မှူးချုပ်အဆင့်နဲ့ မြောက်ပိုင်းတိုင်းမှူးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာပါ။ ဖေဖေဟာ ရှေ့တန်းမှာပဲနေပြီး စစ်ဆင်ရေးတွေ ကို တိုက်ရိုက် ကွပ်ကဲနေတာပါ။ အဲဒီကနေ လိုအပ်တဲ့ လက်နက် ခဲယမ်းမီးကျောက်၊ စစ်ကူအင်အား၊ အထူးထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်း (ဥပမာ- ဆေးဝါး၊ အာဟာရ စသဖြင့်) စတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို စစ်ရုံးချုပ်ကလာတဲ့ စစ်ဦးစီးအရာရှိတွေကို နောက်တန်း ပြန်ပြန်ပြီး တင်ပြတောင်းခံရပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက ဗိုလ်အောင်ကြီးက စစ်ဦးစီးဌာနတာဝန်ခံ ဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်နဲ့ပါ။ သူတို့က အန္တရာယ်ကြီးလှတဲ့ ရှေ့တန်းအထိ မလာပါဘူး။ ဖေဖေက ရှေ့တန်းကနေ မိုင်းဆတ်လို၊ ကျိုင်းတုံလို လေယာဉ်ကွင်းရှိတဲ့ နေရာတွေ ပြန်ပြီး သူတို့နဲ့ ဆွေးနွေး တောင်းဆို ရတာပါ။ ဗိုလ်အောင်ကြီးပဲ ဦးစီးပြီး လာတတ်ပါတယ်။ အဲဒီကာလက သူတို့က ပြည်တွင်းစစ်တိုက်ဖို့ပဲ (အောင်မာဃ စစ်ဆင်ရေးအတွက် ပြင်ဆင်နေချိန်ပါ) အားသန်နေလို့ တရုတ်ဖြူ စစ်မြေပြင်အတွက် လိုအပ်ချက်တွေ တောင်းရတာ သိပ်လက်ဝင်တာပဲလို့ ဖေဖေက ပြန်ပြောပြဖူးပါတယ်။ တော်သေးတယ်။ အဲဒီတုန်းက ဖဆပလအစိုးရက လူထုရဲ့ ဖိအားကြောင့် တရုတ်ဖြူ စစ်ဆင်ရေးတွေကို အားပေးထောက်ခံခဲ့လို့ သက်သာတာလို့ ဖေဖေက ဆက်ပြောခဲ့ပါတယ်။
အဲဒါသာကြည့်ပါ။ ဗိုလ်အောင်ကြီးတို့ ဘယ်လောက် သြဇာကြီးခဲ့တယ်ဆိုတာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
၁၉၅၈ ခုနှစ် အိမ်စောင့်အစိုးရ တက်လာပြီးတဲ့နောက် စစ်တပ်က စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့ DSI တို့ BEDC တို့ ကိုပါ လုပ်ဆောင်လာတဲ့ အခါမှာတော့ ဘယ်ပြောစရာ ရှိတော့မလဲ။ ဒီကြားထဲ ဗိုလ်အောင်ကြီး ကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်ပြီး ဂျပန် စစ်လျော်ကြေးကိစ္စ ဆွေးနွေးရာမှာ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေ အများအပြား ရရှိလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ဗိုလ်အောင်ကြီးတို့ သြဇာအတက်ဆုံး ကာလလို့တောင် ပြောလို့ ရမယ်ထင်ပါတယ်။ အဲဒီဂျပန်ကရတဲ့ စီမံကိန်းတွေကို ဗိုလ်အောင်ကြီးက သူ့ ညီဖြစ်တဲ့ ဦးအောင်လေးတို့၊ သူနဲ့ အလွန်ရင်းနှီးတဲ့ (သူ့ ရဲ့ Proxy လို့လည်း ဆိုနိုင်တဲ့) ဦးဇော်ညွန့်၊ ဒေါ်ထူး (ထူးကုမ္ပဏီ ပိုင်ရှင်များ)တို့ကို ခွဲဝေပေးပြီး လုပ်ဆောင်စေခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့်ပဲ ၁၉၆၃ ခုနှစ်၊ သူ့ကို အငြိမ်းစားပေးလိုက်ပြီးနောက် ဗိုလ်နေဝင်းက- အောင်ကြီး စားထားသမျှတွေကို ငါ့ခြေမနဲ့ ပြန်ကော်ထုတ်မယ်လို့ ကြိမ်းဝါးဖူးပါတယ်။ ဗိုလ်နေဝင်းက- ဗိုလ်အောင်ကြီး သြဇာကြီးလာမှုဟာ သူ့ ထိုင်ခုံလှုပ်လာစေတယ်၊ သူ့ခြေရာ တိုင်းလာတာဖြစ်တယ်လို့လည်း ပူပန်လာပုံရပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ဗိုလ်နေဝင်းဟာ သူ့ နေရာတစုံတရာ ခိုင်မာလာရင် သူ့ကို အဲဒီနေရာတင်ပေးခဲ့တဲ့ ဘယ်ကျေးဇူးရှင်ကိုမှ ချမ်းသာမပေးဘူးဆိုတာ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် တွေ့နိုင်ပါတယ်။ (ပထမအကြိမ်ကတော့ တည်မြဲခေါင်းဆောင်တွေ ကိုရော၊ တပ်တွင်းက ဆိုရှယ်လစ် တပ်မှူးများကိုရော ၁၉၆၂ ခုနှစ် စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက် ဖြေရှင်းလိုက်တဲ့ ကိစ္စပါ။)
ဗိုလ်အောင်ကြီးဟာ ဗိုလ်နေဝင်းကို ပခုံးနဲ့ထမ်းပြီး၊ အဲဒီနေရာတွေရောက်အောင် တင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဗိုလ်နေဝင်း ကိုယ်တိုင်က ဗိုလ်အောင်ကြီးကို ဖြုတ်ချပြီးနောက် စိတ်မလုံဟန်ရှိပုံရပြီး ဒါကြောင့်ပဲ ဘာကြောင့် ဗိုလ်အောင်ကြီးကို ဖြုတ်ရတဲ့ အကြောင်းတွေကို (သူ‹မဆလအတွက် အားကိုး အားထားပြုနေရတဲ့) သခင်တင်မြတို့အုပ်စုကို ရှင်းပြတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ယခုတလော ဂျာနယ်တွေမှာ သူတို့ပြန်ရေးတာတွေ တွေ့နေရပါတယ်။ ဗိုလ်နေဝင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က (အဲဒီ သခင်တင်မြတို့ အုပ်စု ပူပန်ကောင်း ပူပန်နိုင်တဲ့) သူဟာ ဘုရားပြီး ငြမ်းဖျက်တဲ့ လူစား မဟုတ်ကြောင်း၊ ဗိုလ်အောင်ကြီးကို သူ အကြိမ်ကြိမ် ခွင့်လွှတ်ခဲ့ကြောင်း၊ သိပ်လွန်လာမှ မလွှဲသာမှ လုပ်ရတာ ဖြစ်ကြောင်း စတာတွေကို အဲဒီလူတွေကို သွယ်ဝိုက်စွာ ရှင်းပြပုံရ ပါတယ်။
ဖေဖေကတော့ ဗိုလ်အောင်ကြီးဟာ ဗိုလ်နေဝင်းအပေါ် နိုင်တဲ့ ဖဲချပ်တွေ ရှိပုံရတယ်။ ဒါကြောင့် ဗိုလ်နေဝင်းက သည်းညည်းခံ နေခဲ့ပြီး၊ နောက်ပိုင်း ဗိုလ်အောင်ကြီး (ဂျပန်စစ်လျော်ကြေး ကိစ္စများမှာ) စီးပွားရေးကိစ္စတွေ မရှင်းမလင်း ဖြစ်လာမှ အပြတ်ရှင်း ပုံရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဖေဖေ ကိုယ်တိုင်လည်း ကိုယ်တွေ့ကြုံဖူးတာ တခုရှိပါတယ်။ တခါက ဖေဖေတို့ တပ်မှူးများ ညီလာခံကျင်းပနေစဉ် တင်းနစ်ပြိုင်ပွဲတခု လုပ်ဖူးတယ်တဲ့။ အဲဒီနေ့က ဖေဖေက ပြိုင်ပွဲက ရှုံးလို့ ထွက်ရပြီး အဝတ်လဲတဲ့ အခန်းဝင်လိုက်တဲ့အခါ အဲဒီအခန်းထဲမှာ ဗိုလ်နေဝင်းနဲ့ ဗိုလ်အောင်ကြီးတို့ နှစ်ယောက် စကားပြောနေကြတာ တွေ့ရပြီး ဗိုလ်အောင်ကြီးဟာ ဗိုလ်နေဝင်းထိုင်နေတဲ့ ခုံရှည်တန်းလျားပေါ်မှာ ခြေထောက် တဖက်တင်ထားပြီး လက်တဖက်ကလည်း ခါးထောက်ပြီး စကားပြောနေတာတဲ့။ ဖေဖေ့ကို မြင်မှ ဗိုလ်အောင်ကြီးက ခြေထောက်ချလိုက်ပြီး ခါးကတော့ ဆက်ထောက်မြဲ ထောက်ထားတယ်တဲ့။ ဖေဖေက သူ တွေ့ဖူးတာကို ပြောပြဖူးပါတယ်။
အဲဒီ ကာလက ဗိုလ်နေဝင်း ကံနိမ့် နေချိန်ပါ။ အိမ်ထောင်ရှိသူ ကစ်တီဘသန်း (ဒေါ်ခင်မေသန်း) ကို ယူလိုက်မှုနဲ့ ဖဆပလ အစိုးရက ဖြုတ်ဖို့ ကြိုးစားနေချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ ဘဝကနေ လွတ်မြောက်အောင် လုပ်ပေးသူတွေထဲမှာ ဗိုလ်အောင်ကြီးဟာ အခရာ အခန်းက ပါခဲ့ပုံရပါတယ်။
ဒါကြောင့် ၂ဝဝ၇ ခုနှစ်က (ဦး)မြတ်ခိုင်နဲ့ ပြုလုပ်တဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း တခုမှာ ဗိုလ်အောင်ကြီးက “ဗိုလ်နေဝင်းနဲ့ ကိုယ်က ငယ်ငယ်ကတည်းက သူလည်း စာရေး၊ ကိုယ်လည်း စာရေး၊ အရမ်း ခင်တယ်ဆိုတာ ဟုတ်တယ်။ ကိုယ်က ဘယ်တုန်းကမှ သူ့ဆရာ မဖြစ်ခဲ့ဘူး။ သူကလည်း ကိုယ့်ကို ဆရာမတင်ခဲ့ဘူး။ သူနဲ့ ကိုယ်တို့ အတူတူနေဖူးတယ်လေ” လို့ ပြောသွားဟန် တူပါတယ်။
(စကားချပ်- အဲဒီ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း တွေမှာပဲ သူက ဖေဖေဟာ အခြေခံနည်းတယ်။ ရည်မှန်းချက်ကြီးတယ်။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံက ထွက်သွားရတယ်လို့လည်း ဆိုထားတာ တွေ‹ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သူ့ဘဝဇာတ်ကြောင်း ပြောသွားရာမှာ “အစ ကတည်းက ကျောင်းသားဘဝ ကတည်းက ခေါင်းဆောင်ချည်းပဲ တောက်လျှောက် လုပ်လာခဲ့တာပါ။ ဘယ်တုန်းကမှ နောက်လိုက်မဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကလည်း ကိုယ့်ကို လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်လိုပဲ သဘောထားခဲ့တာပါ” လို့ ပြောထား ပါတယ်။ ဖေဖေကတော့ ဒါတွေကို ဖတ်ပြီး “တော်သေးတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာ ကိုယ့်တပည့်ပါလို့ မပြောတာ” လို့ ဆိုပြီး ရယ်နေခဲ့ဖူးပါတယ်။)
အဲသလိုသာ ပြောနေတာ။ ဗိုလ်နေဝင်းကိုတော့ မပြတ် လှမ်းဖားနေတာပါပဲ။ ၁၉၈၈ ခုနှစ် ဝန်းကျင်းများက ထွက်လာတဲ့ သူ့ရဲ့ “ ဗိုလ်နေဝင်းသို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာများ ”ဟာ တဖက်ကလည်း လူထုအုံကြွမှုကြီးကို ပိုမိုတက်ကြွလာအောင် အကျိုးပြုခဲ့ပေမယ့် တဖက်ကလည်း အခု ဖြစ်ရပ်တွေကို ဗိုလ်နေဝင်းက ဘာမှမသိရှာဘဲ အောက်ခြေ (ဗိုလ်တင်ဖေတို့ အုပ်စုကို ရည်ညွှန်းပုံရပါတယ်) က အရမ်း လျှောက်လုပ်လို့ ဖြစ်ရတာလို့ ဆိုပြီး ဗိုလ်နေဝင်းအတွက် ရှေ့နေလိုက်ထား ပေးတာပါ။ သူ့အ ခြေခံ စိတ်ဓာတ် (ဗိုလ်နေဝင်းကို ဆရာ တင်မြဲ တင်ချင် တဲ့ စိတ်ဓာတ်) လည်း ပေါ်ပါတယ်။
၁၉၈၉ ခုနှစ် စစ်တပ် အာဏာသိမ်းပြီးနောက် ကျွန်မတို့ ပါတီရှိရာ အရှေ့မြောက်စစ်ဒေသ ပန်ဆန်းကိုရောက်လာတဲ့ မြို့ပေါ်က သပိတ်မှောက် ကျောင်းသားတွေထဲက ကျောင်းသားတယောက် ပြောပြဖူးတာရှိပါတယ်။ “ ကျွန်တော်တို့က ဗိုလ်ချုပ်အောင်ကြီးကိုလည်း ဒီမိုကရေစီ ဖခင်ကြီးအဖြစ် လေးစားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူက စစ်တပ်ကို စိတ်နဲ့ တောင် မပြစ်မှားနဲ့ လို့ ဆိုလိုက်ချိန်မှာတော့ သူဟာ ဒီပုတ်ထဲက ဒီပဲ ပဲ၊ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ကာကွယ်ချင်သူပဲ ဆိုတာ တခါတည်း သဘော ပေါက်သွားပါတယ်” တဲ့။
ဗမာပြည်သူတွေရဲ့ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှု မုန်တိုင်းဟာ ပြင်းထန်ပါတယ်။ အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး လှုပ်ရှားမှုဆိုတာ ရေရှည်ဆင်နွှဲရတဲ့ တိုက်ပွဲပါ။ ပြည်သူလူထု အကျိုးစီးပွားဘက်က ရပ်တည်ပြီး တသမတ်တည်း လုပ်ဆောင်ဖို့ဆိုတာ ခက်ခဲလှပါတယ်။ မော်စီတုန်း ပြောဖူးသလိုပဲ။ “ ကိစ္စကောင်း တခုလုပ်ဖို့ ဆိုတာ လွယ်တယ်။ တသက်လုံး လုပ်ဆောင်သွား ဖို့ ဟာကတော့ ခက်တယ် ”ဆိုတဲ့ အတိုင်းပါပဲ။
လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲများမှာ သမိုင်းလှခဲ့တဲ့ ဗိုလ်အောင်ကြီးအနေနဲ့ လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက် ကွန်မြူနစ် ဆန့်ကျင်ရေး (တကယ်တော့ ပြည်သူ့အကျိုး ဆန့်ကျင်ရေး) ဆိုတဲ့ ကြွေးကြော်သံ အောက်မှာ ဗမာ့တပ်မတော်ကို ဗိုလ်နေဝင်းရဲ့ တလက်ကိုင် ကြေးစားတပ်ဖြစ်အောင် စစ်ဗျူရိုကရက် စနစ်တရပ် ပေါ်ပေါက်လာအောင် လုပ်ဆောင် ပေးခဲ့တဲ့ ဗိုလ်နေဝင်းရဲ့လက်ရုံး ဘက်တော်သား တဦး ဖြစ်ခဲ့ ဆိုတာတွေကိုရော၊ ၈ လေးလုံး အပြီး နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ဖျက်မြင်း အဖြစ် ပါဝင်ခဲ့တာတွေကိုရော တွေ့ရှိလာနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ပြည်သူလူထုက ဗိုလ်အောင်ကြီးကို နောက်ပိုင်းမှာ “ စမူဆာ ဗိုလ်အောင်ကြီး ” လို့ နာမည် ပေးလိုက်ပုံ ရပါတယ်။ ပြည်သူလူထုကတော့ ဘယ်တော့မှ မျက်နှာ မလိုက်ပါဘူး။
One Response to ဒေါက်တာ လှကျော်ဇော – ဆိုရှယ်လစ်တပ်မှူးများ- အပိုင်း(၁) – ဗိုလ်အောင်ကြီး
Dr. Maung on November 17, 2014 at 1:11 pm
Ma Ma Hla(Dr. Hla Kyaw Zaw), I like your articles very much & I do agree with you. Bo Aung Gyi, I think was not onlyatrue politician, socialist, patriot but also real opportunist and (Lum Phar to Bo Ne Win). He should be called in Burma’s political history as multi-faced amoeboid soldier and notaDemocracy Father as one student activist said . I like to call him Democracy Bastard! Dr.Maung( 1973 Batch,I.M(1)Rgn)